को ब्रसेल्स सबैभन्दा प्रसिद्ध ल्यान्डमार्क - छहरा "Manneken Pis"
छहरा "Manneken Pis" - ओक सडक र Banna को चौराहे मा, बेल्जियम राजधानी को दिल मा, यो, पक्कै बिना संसारको सबै भन्दा प्रसिद्ध मूर्तिहरु को एक र, ब्रसेल्स सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण छ। यो पूल मा pees गर्ने नाङ्गो सानो केटा को एक सानो मूर्ति छ। हुनत संरचना समान संसारभरिका अन्य शहर फेला ब्रसेल्स कांस्य मूर्तिकला हरेक वर्ष पर्यटक हजारौं र हजारौं संकलित नजिकै (उदाहरणका लागि, Gerardsbergene, Hasselt मा, घेंट यसको आफ्नै "Manneken Pis" छ)। निस्सन्देह, बेल्जियम "Manneken Pis" - सबैभन्दा संसारमा प्रसिद्ध।
त्यहाँ मुर्ति को मूल बारेमा धेरै दन्त्यकथा हो, र सबै भन्दा तिनीहरू साधारण Dyuka Godfri III को नाम संग जोडिएको छ। सेना सम्राट Gottfried तेस्रो लोवेन शत्रु संग लडे जब युद्ध, समयमा Grimbergenskoy, आफ्नो दुई वर्षको छोरा (यो तेस्रो Dyuk Godfri थियो) भविष्यमा शासक प्रेरित नागरिक हेर्न रूख मा एक टोकरी मा हङ। बाल कथित रूखमुनि लडे जो सैनिकहरू माथि urinated, र तिनीहरूले युद्धमा गुमाए।
त्यहाँ अर्को संस्करण हो। 14 औं शताब्दीमा ब्रसेल्स शत्रु विस्फोटक राख्नु र शहर पर्खाल माथि झटका गर्न खोजे, कब्जाको थियो। तर तिनीहरूले जसको नाम जुलियन थियो एक सानो केटो, पछि छन्। बच्चा यसरी शत्रु द्वारा राखे पनि बारूद बाहिर राख्नु, जलिरहेको फ्यूज मा peed र शहर सुरक्षित गरियो।
तथापि, त्यहाँ मूर्तिकला "Manneken Pis" को मूल बारेमा बताउँछ अर्को कथा छ। एक दिन, एक धनी व्यापारी सानो छोरा हराएको भयो। हामी, यो पाउन शहर को हरेक कुना खोजी गर्न मानिसहरूको ठूलो समूह भेला भए। र फेला बच्चा बगैंचामा peeing। स्थानीय बासिन्दा एक फोहरा स्थापना गर्न यो बिन्दुमा निर्णय व्यापारी बेहद खुशी, साथै धन्यवाद थियो।
को मूर्तिकला को लेखक "Manneken Pis"
जहाँ सत्य र कल्पना अब छ शायद जो कोहीले थाह छ। यो authentically यसको वर्तमान फारम मुर्ति 1619 मा सिप-mannerist अदालत मूर्ति जेरोम Duquesnoy धन्यवाद प्राप्त गर्ने, परिचित छ। र 1695 देखि, बारम्बार यसलाई अपहरण भएको छ। यो ब्रसेल्स मा Napoleonic सेना को अवधिमा भयो, र अन्तिम समय मूर्तिकला "Manneken Pis" यो छ, जो पछि 1960 मा चोरी भएको थियो एक पटक, रूपमा, प्रतिलिपि प्रतिस्थापन। 1908 मा, अपहर्ताओं पछि लाग्नुलाई मा पनि म्युट मूर्तिहरू फ्रान्सेली चलचित्र खिच्नुभयो थियो।
यो फोहरा संग उत्सुक परम्परा सबै किसिमका धेरै सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि, बिदाको समयमा यो पानी बियर वा रक्सी को धारा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरे। साथै, "Manneken Pis" समय समयमा मुर्ति वेशभूषा मा तैयार छ। पहिलो अर्डर मूर्तिकला लागि, कथा जान्छ रूपमा, 1968 मा Bavarian Elector Maximilian-ईम्यानुएल द्वारा स्थापित भएको थियो, र तब देखि यो मात्र एक परम्परा भएको छ, तर आदर अतिथि एक प्रकारको मा।
ग्रिड मा छहरा सबै "Manneken Pis" महिनाको समयमा परिवर्तन हुनेछ भनेर आदेश मासिक सूची पोस्ट छ। धेरै सय फरक वेशभूषा मूर्तिहरू दराज समावेश छ। सबै लुगा नाम "Manneken Pis को मित्र" संग गैर लाभ संगठन द्वारा संकलित सूची अनुसार कडाई परिवर्तन छन्। नियम, एक पीतल ब्यान्ड द्वारा प्ले समारोह मा वस्त्र को परिवर्तन र कार्य रूपमा एउटा वास्तविक उत्सव मा उत्तेजित गर्दछ। केन्द्रीय शहरी क्षेत्रहरु मा मूर्तिकला नजिकै, एक प्रदर्शनी कपडे जो आठ भन्दा बढी आइटम संग रयल संग्रहालय। धेरै वेशभूषा जसको नागरिकहरु एक पर्यटक गन्तव्य रूपमा बेल्जियम राजधानी भ्रमण देशहरूको राष्ट्रिय वस्त्र, छन्। अन्य वस्त्र - विभिन्न पेशों, सैन्य सेवा, संगति र यति मा प्रतिनिधिहरूलाई एक वर्दी।
कि छैन मात्र ढाकिएको "Manneken Pis" को मुर्ति समयमा! उदाहरणका लागि, एक हंगेरी hussar पोशाक मा लुगा को छ महिना यूएस राष्ट्रपतिको पद हंगेरी केटा पछि। 2004 मा, माफी अन्तर्राष्ट्रिय को पहल मा बच्चा सैनिकहरु को समस्या ध्यान चित्रकला को उद्देश्य यसलाई सिपाहीहरूले वर्दी पहने। केटा मा प्रयास पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष मिसन, रूसी cosmonaut सुट, सान्ता क्लाउस outfit, परिधान उरोलोजस्त प्रस्तुत, अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका, एक लडाकु सुट जुडो पोशाकहरू ड्रेकुला को Cadet बल र Incas र धेरै अरूको दुष्ट आत्मा गठन।
यो एक प्रयास मा धेरै समान रचनाहरूको मा स्थापित ब्रसेल्स को फोहरा महिमा राख्न भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले, 1987 मा, छैन टाढा "Manneken Pis" बाट, निष्ठा को गल्ली को अन्त मा, हामी "केटी लेखे।" राख्नु एक संस्करण अनुसार, मूर्ति शहर को दुनिया-प्रसिद्ध प्रतीक को एक खुट्टाोडी जोडी थियो। लेखक मूर्तिकला - डेनिस एड्रियन Debuvri। को संरचना तल स्थापित ट्यांक मा यस्तो लेखे गर्ने नग्न केटी छ। सुरक्षाको लागि मुर्ति एक जाली द्वारा संलग्न छ जो आला छ।
ब्रसेल्स को केन्द्र मा, त्यहाँ अर्को यस्तै मूर्तिकला छ। यो कांस्य मुर्ति mongrel कुकुर pissing, पूर्ण-मात्रा गरे। पशु upraised फर्श खाँबो पछिल्लो पन्जा संग चित्रण गरिएको। यो संरचना मूर्ति टम Frantsenom द्वारा 1999 मा सिर्जना गरिएको थियो। रूपमा लेखक द्वारा प्रमाणित मिश्रित नस्ल को एक कुकुर, फरक संस्कृति बाट ब्रसेल्स मा संघ प्रतिनिधित्व गर्दछ। को मूर्तिकला "Pissing कुकुर" हेर्नुहोस् यसको सिर्जनाको लागि एक विचार रूपमा सेवा जो फोहरा "केटी लेख्न" र "Manneken Pis", टाढा हुन सक्छ। यहाँ यो पनि बेल्जियम कला हो!
आफ्नो परिवार मा परिवार र परम्परा के हुन्?
सोफिया र सोफिया - विभिन्न नाम वा छैन? नाम सोफिया र सोफिया
सम्मान आदेश र अर्डर "सम्मान ब्याज"
यस हितोपदेशको मान "porridge घिउ बिगार्छ छैन।" यो लोकप्रिय बुद्धि गर्न उचित छ?
को ईसीजी हृदय के हुनेछ? रोग को संकेत
मानिसले बनाएको धर्म - यो के हो? छद्म-धार्मिक शिक्षा
Socionics को तर्फ देखि एक दृश्य: एक extrovert गर्ने छ
राइट को शैली मा हाउस (फोटो)
म पैनकेक के सपना सपना बुझ्न?
तपाईं फेब्रुअरी 14 को लागि एक मान्छे के दिन सक्छ? एक प्रेम एक लागि आश्चर्य
बोसो बर्नर नरकको आगोजस्ता: ग्राहक समीक्षा
कसरी मांसपेशिहरु को एक सेट को लागि एक आहार सिर्जना गर्न
Roulade - एक roulade ... संगीत के हो?